Ụlọ Nche—Nke A Na-amụ Amụ | Ọgọst 2018
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Alur Amharic Amis Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Belize Kriol Bengali Bicol Boulou Bulgarian Cakchiquel (Western) Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chol Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Damara Dangme Danish Douala Dutch Edo Efik English Esan Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Jula Kabiye Kabuverdianu Kannada Kekchi Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Low German Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mam Mambwe-Lungu Marathi Marshallese Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mingrelian Mixe Mixtec (Guerrero) Mongolian Moore Motu Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (West Africa) Polish Ponapean Portuguese Portuguese (European) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Sepulana Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin South African Sign Language Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Urhobo Uzbek Uzbek (Roman) Venda Vietnamese Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
MGBE Nwanna George Young nọ n’ụgbọ mmiri na-aga Yurop n’agbanyeghị aka ọjọọ oké ifufe Atlantik nọ na-akpa ụgbọ ha, obi nọ na-atọ ya ụtọ ka ọ na-eche gbasara mkpụrụ Alaeze ọ ghara na Brazil. * Ma ka ha nọ na-aga, ọ malitere iche gbasara ọrụ ọhụrụ e nyere ya, ya bụ, ịga kwusaa ozi ọma n’ọtụtụ ebe a na-ekwusatụbeghị ozi ọma na Spen nakwa na Pọtugal. Ozugbo o rutere, ọ chọrọ ịhazi otú ọ ga-esi enyefe narị puku traktị atọ, haziekwa ka Nwanna J. F. Rutherford bịa kwuo okwu ihu ọha n’ebe ahụ.
Nwanna Young ji ụgbọ mmiri gaa ebe dị iche iche kwusaa ozi ọma
Ozugbo Nwanna Young rutere Lisbọn n’afọ 1925, ọ chọpụtara na e nwere ọgba aghara n’obodo a. Mgbanwe e mere n’ọchịchị n’afọ 1910 mere ka ndị eze kwụsị ịchị Pọtugal, meekwa ka ndị Chọọchị Katọlik gharakwa ịbụ ndị ọnụ na-eru n’okwu. Ndị mmadụ bịara nwerekwuo onwe ha, ma ọgba aghara ka na-aga n’ihu ebe niile na Pọtugal.
Mgbe Nwanna Young haziri ka Nwanna Rutherford bịa kwuo okwu ihu ọha, ndị ọchịchị nyere iwu kpụ ọkụ n’ọnụ n’ihi na e nwere ndị kpara nkata ịkwatu ọchịchị. Odeakwụkwọ nke otu òtù na-asụgharị Baịbụl gwara Nwanna Young na a ga-emesi ya ike. Ma, Nwanna Young rịọrọ ka e nye ya ụlọ a na-anọ emega ahụ́ n’otu ụlọ akwụkwọ sekọndrị ka a nọrọ na ya kwuo okwu ihu ọha ahụ, e nye ya.
Ụbọchị Nwanna Rutherford ga-ekwu okwu ihu ọha ahụ eruola, ya bụ, n’abalị iri na atọ n’ọnwa Mee. Ndị mmadụ nọ na-atụsi anya ụbọchị ahụ ike. A kpọsara ya n’akwụkwọ akụkọ, dee ya n’obodobo akwụkwọ ma mapawa ya n’ụlọ dị iche iche. Isiokwu okwu ihu ọha ahụ bụ “Otú Ị Ga-esi Adị Ndụ Ebighị Ebi n’Ụwa.” Ndị okpukpe na-emegide anyị mere ngwa ngwa dee otu isiokwu n’akwụkwọ akụkọ ha iji dọọ ndị na-agụ ya aka ná ntị maka “ndị amụma ụgha” ọhụrụ bịaranụ. Ha nọkwa n’ọnụ ụzọ e si abata n’ebe ahụ a nọ na-ekwu okwu ihu ọha ahụ nyefee ndị mmadụ ọtụtụ puku broshọ ndị na-ekwu ihe ndị megidere ihe ndị ahụ Nwanna Rutherford na-akụzi.
N’agbanyeghị ihe niile ha mere, ihe dị ka puku mmadụ abụọ juru n’ebe ahụ, ebe ihe dị ka puku mmadụ abụọ enweghị ike ịbata n’ihi na e nweghị ebe ha ga-anọ. Ụfọdụ ndị ọ na-agụsi agụụ ike ịnụ okwu ihu ọha ahụ rigooro n’ubube dị n’akụkụ ebe ahụ, ndị ọzọ arịgoro n’elu ihe ndị ahụ e ji emega ahụ́.
Ihe niile agachaghị siriri werere. Ndị na-emegide anyị nọ na-eti mkpu, na-emebisi oche. Ma, Nwanna Rutherford atụghị ụjọ ọ bụla, o ji nwayọọ rigoro n’elu tebụl ka ndị mmadụ nwee ike ịna-anụ ihe ọ na-ekwu. Mgbe o kwuchara n’ihe fọrọ obere ka o ruo elekere iri na abụọ nke ime abalị, ihe karịrị otu puku na narị mmadụ abụọ nyere aha ha na adres ha a ga-eji na-ezitere ha akwụkwọ ndị e ji amụ Baịbụl. N’echi ya, otu akwụkwọ akụkọ a na-akpọ O Século kọrọ gbasara okwu ihu ọha ahụ Nwanna Rutherford kwuru.
N’ihe dị ka n’ọnwa Septemba afọ 1925, a malitere ibipụta Ụlọ Nche n’asụsụ Pọtugiiz n’obodo Pọtugal. Tupu mgbe ahụ, a malitela ibipụta Ụlọ Nche n’asụsụ Pọtugiiz n’obodo Brazil. Ọ bụ n’oge ahụ ka Nwanna Virgílio Ferguson, bụ́ Onye Mmụta Baịbụl na Brazil chọrọ ịkwaga Pọtugal ka o nye aka ikwusa ozi ọma Alaeze. Ya na Nwanna Young rụburu ọrụ n’obere alaka ụlọ ọrụ nke Ndị Mmụta Baịbụl dị na Brazil. Ọ dịghị anya, Nwanna Virgílio na nwunye ya Lizzie akwaga na Pọtugal ka ya na Nwanna Young rụwakwa ọrụ. Nwanna Ferguson bịara n’oge kwesịrị ekwesị n’ihi na ọ gaghị adị anya Nwanna Young agaa ebe ndị ọzọ ikwusa ozi ọma, ma na Sọviet Yuniọn.
Akwụkwọ e ji nye Nwanna Virgílio Ferguson na nwunye ya Lizzie ikike ibi na Pọtugal n’afọ 1928
Mgbe ndị amị malitere ọchịchị aka ike na Pọtugal, mmegide kpụụrụ ọkụ n’ọnụ. Nwanna Ferguson katara obi nọrọ, ma mee ka okwukwe Ndị Mmụta Baịbụl ahụ sie ike, meekwa ka ha kata obi na-ezi ozi ọma. Ọ rịọrọ ka e kwe ka a na-eji ụlọ ya na-enwe ọmụmụ ihe. Ha mechara kweta n’ọnwa Ọktoba afọ 1927.
N’afọ mbụ ndị amị malitere ọchịchị na Pọtugal, ihe dị ka narị mmadụ anọ na iri ise tụrụ ọda Ụlọ Nche. E jikwa traktị na akwụkwọ nta dị iche iche mee ka eziokwu ruo ebe niile ndị Pọtugal na-achị. Ha bụ Angola, Azores, Goa, Ist Timọ, Kep Vad, Madera, na Mozambik.
N’afọ 1929, otu onye Pọtugal na-akọ ugbo kwatara na Lizbọn. Aha ya bụ Manuel da Silva Jordão. Mgbe o bi na Brazil, o gere okwu ihu ọha Nwanna Young kwuru. Ọ ghọtara eziokwu ahụ ma dị njikere inyere Nwanna Ferguson aka ime ka ọtụtụ ndị nụ ozi ọma na Pọtugal. Ka o nwee ike ime otú ahụ, Nwanna Manuel ghọrọ onye kọpọtụa. Ọ bụ ihe a na-akpọ ndị ọsụ ụzọ n’oge ahụ. N’ihi otú e si na-ebipụta akwụkwọ ndị anyị ji amụ Baịbụl ma na-ekesa ha, ọgbakọ ọhụrụ a nọ na Lizbọn malitere ito.
N’afọ 1934, Nwanna Ferguson na nwunye ya laghachiri Brazil. Ma, tupu ha alaghachi, a kụọla eziokwu ahụ na Pọtugal. N’agbanyeghị ọgba aghara e nwere na Yurop n’oge ahụ a na-alụ agha na Spen, nakwa Agha Ụwa nke Abụọ, ụmụnna ndị ahụ nọ na Pọtugal nọgidere na-efe Jehova. Ruo oge ụfọdụ, ha dị ka icheku ọkụ. Ma n’afọ 1947, ha malitere inwu dị ka ọkụ mgbe e zitere onye ozi ala ọzọ mbụ gara Ụlọ Akwụkwọ Gilied aha ya bụ John Cooke n’obodo ahụ. Mgbe nke ahụ gachara, ndị nkwusa e nwere na Pọtugal bịara na-ebukwu ibu. Ma mgbe ndị ọchịchị machibidoro anyị iwu n’afọ 1962, ndị nkwusa nọkwa na-amụba. N’ọnwa Disemba afọ 1974, mgbe e debara aha Ndịàmà Jehova n’akwụkwọ ka okpukpe iwu kwadoro, e nwere ihe karịrị ndị nkwusa puku iri na atọ na Pọtugal.
Taa, ihe karịrị puku ndị nkwusa iri ise na-ekwusa ozi ọma Alaeze Chineke na Pọtugal nakwa n’ọtụtụ agwaetiti ndị a na-asụ Pọtugiiz, ma na Azores na Madera. Ụfọdụ ndị nkwusa nọ n’obodo a ugbu a bụ ụmụ ndị ahụ gere okwu ihu ọha ahụ dere ude Nwanna Rutherford kwuru n’afọ 1925.
Anyị na-ekele Jehova nakwa ụmụnna ndị mbụ ahụ katara obi kwusaa ozi ọma dị ka ‘ndị ozi Kraịst Jizọs ndị na-ejere ọha mmadụ bụ́ ndị mba ọzọ ozi.’—Rom 15:15, 16.—Ihe si n’ebe anyị na-edebe ihe ochie na Pọtugal.
^ para. 3 Gụọ isiokwu bụ́ “A Ga-arụ Nnukwu Ọrụ Ka E Nwee Ike Ịkụziri Ndị Mmadụ Eziokwu Baịbụl.” Ọ gbara n’Ụlọ Nche nke Mee 15, 2014, peeji nke 31 ruo na nke 32.
Ihe karịrị narị puku Ndịàmà Jehova asaa na iri puku isii na-ezi ozi ọma na Brazil. Olee otú Ndị Mmụta Baịbụl si bido izi ozi ọma na Brazil na mba ndị gbara ya gburugburu?
Onye Nyere Ọtụtụ Mbe Ìhè
Nwanna Douglas Guest na nwunye ya hụrụ ụzọ Jehova si meere ha obiọma mgbe ha na-asụ ụzọ na Kanada na mgbe ha bụ ndị ozi ala ọzọ na Brazil nakwa na Pọtugal.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Otú E Si Kụọ Mkpụrụ Alaeze Mbụ na Pọtugal
IHE SI N’EBE ANYỊ NA-EDEBE IHE OCHIE Otú E Si Kụọ Mkpụrụ Alaeze Mbụ na Pọtugal
Ụdị Dị Iche Iche Họrọ ụdị nke ị ga-ewere ỤLỌ NCHE—NKE A NA-AMỤ AMỤ Ọgọst 2018
Nke a na-egere egere Họrọ ụdị nke ị ga-ewere ỤLỌ NCHE—NKE A NA-AMỤ AMỤ Ọgọst 2018
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ ỤLỌ NCHE—NKE A NA-AMỤ AMỤ Ọgọst 2018
ỤLỌ NCHE—NKE A NA-AMỤ AMỤ Ọgọst 2018